China SARS-CoV-2 (2019-nCoV) mpamantatra sy mpamatsy vahaolana tanteraka | Jianma
Ny teknolojia ASEA, andiam-pamokarana asidra nokleika vaovao izay novolavolain'ny orinasa tsy miankina, dia teknolojia fikarohana asidra nokleina haingana sy tsotra ary haingana, izay afaka mamita ny fizotrany rehetra manomboka amin'ny "santionany amin'ny valiny" ao anatin'ny 35 minitra, ary mahatsapa ny fanatsarana lehibe ny fitiliana asidra niokrika hatramin'ny "haavon'ny ora" ka hatramin'ny "haavon'ny minitra"
Novel coronavirus 2019 novel coronavirus novel coronavirus (nCoV) ORF1ab sy N gen dia hita tao anatin'ireo fehin-kibo ary niahiahy ireo santionan'ny ranon-drongony bronchoalveolar avy amin'ny savony voan'ny tenda ary ireo santionany azo avy amin'ny lavona bronchoalveolar Nahazo taratasy fanamarinana CE ny vokatra ary niditra tamin'ny lisitra fotsy misy akora fanoherana ny valanaretina natolotry ny Minisiteran'ny Varotra. Ireo reagents henjana sy ranoka dia mahafeno ny filan'ny scenario fitahirizana samihafa, manome anao safidy isan-karazany.
Ny programa fandokoana satro-boninahitra vaovao (fanodinana santionany + fanamafisana + fitaovana) an'ny
Qingdao Jianma Gene Technology Co., Ltd. dia tsy mitaky laboratoara mandroso, tsy misy dingana fanampiny fitrandrahana asidra nokleika.
Ny vahaolana amin'ny detection satro-boninahitra vaovao (fanodinana santionany + fanamafisam-peo + fitaovana) dia tsy mitaky laboratoara mandroso, tsy misy dingana fitrandrahana asidra noklealy bead, tsy mila fitaovana fanamafisam-bola lafo vidy.
35 min ihany no ilaina amin'ny Sample ka hatramin'ny valiny.
Ho an'ny santionana tokana dia mamonjy 70% ny fotoana raha ampitahaina amin'ny RT-PCR nentim-paharazana, ary mampitombo ny fahombiazan'ny detection hatramin'ny 375%.
Ny vokatra dia manana fanamarinana anatiny ary fanamarinana CE, afaka manome vokatra feno ho an'ny fanondranana mivantana.
Salama, ary tsy miandry intsony!
Protokol detection haingana tsy misy fitrandrahana aroso toy izao:
Device: ND360 Rafitra PCR habetsahan'ny fluoresensia amin'ny fotoana tena izy.
fitrandrahana: JM101 Kitapo fitrandrahana asidra nokleary haingana.
Detection:JM001 Kit ny detection asidra noklealy SARS-CoV-2 (Fomba fanao fluorescence PCR haingana).
Misy reagent Lyophilized hanohanana ny fitaterana mari-pana ara-dalàna
karazana Fanjakana matanjaka
Fomba fitehirizana sy fitaterana mari-pana maripana mahazatra
Haben'ny boaty 25cm * 20cm * 18 cm
Isan'ny kitapo Boaty 10
lanja 5 kg
© Copyright - 2010-2020: Voatahiry ny Zo rehetra. Kitapo fitrandrahana asidra niokleary haingana, Canine Parvovirus (Cp), Kitapo tsy misy fitrandrahana, Kitapo fitsapana haingana an'i China,